यो अन्तिम १० प्रतिशत हो Martech Zone
सोमबार, जनवरी 7, 2008 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
पछिल्लो केहि महिनाहरूमा हामीसँग हाम्रो अनुप्रयोग र हाम्रो एकीकरणमा नयाँ प्रकार्यको कम्तिमा एक दर्जन विज्ञप्तिहरू छन्। दुर्भाग्यवस, हामीसँग केहि परियोजनाहरू छन् जुन धेरै सुरु भएको थियो, धेरै महिना अघि मेरो आगमन अघि जुन अझै उत्पादनको लागि तैयार छैन। यो टोलीको गल्ती होइन, तर अब यो उत्पादनमा पुग्ने जिम्मेवारी हो।
मसँग सहि टिम र सही टेक्नोलोजी छ भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन। तर of ०% काम ज्यादै लामो भयो।
यहाँ अन्तिम १०% भन्दा बढी हामीलाई प्राप्त गर्ने योजना छ:
तपाईका विकासकर्ताहरूलाई कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न लगाउनुहोस्।
कागजात अनुरोध महान विस्तारको साथ परिवर्तन गर्दछ र टोलीबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुहोस् किन ती परिवर्तनहरू गर्नु आवश्यक छ।
परिवर्तनहरू कहिले पूर्ण हुन्छन् भन्नेमा सम्झौता प्राप्त गर्नुहोस्।
अर्को प्रदर्शनको तालिका बनाउनुहोस्।
चरण to मा जानुहोस्।
एक पटक परियोजना ढिला भयो भने, जोखिम वास्तवमै बढ्छ कि फेरि ढिला हुन्छ। विगतका कामहरूमा, म वास्तवमै राहतको सास सुनेको थिए जब डेडलाइन भाँचिएको थियो ... किनकि यसले पूरा हुन बढी समय किन्छ। कर्मचारीहरू जहिले पनि ठूलो काम गर्न चाहन्छन् र विकासकर्ताहरू विशेष रूपमा उनीहरूको प्रतिभा देखाउन मन पराउँछन्।
हामीसँग एक हप्ता वा एक अघि डेमो थियो त्यो धेरै राम्रोसँग जान सकेन। विकासकर्ताहरूले ढिला देखाए, तिनीहरूले अनुरोधको साथ म्यानुअल अनुरोध शुरू गरे (एक ह्याकको एक बिट), र त्यसपछि लेनदेन असफल भयो। जब यो असफल भयो, मौनता थियो। र अधिक मौन। र केहि बढि। हामीले केहि सम्भावित समाधानहरूको माध्यमबाट कुरा गर्यौं र नम्रतापूर्वक डेमोलाई बन्द गर्‍यौं।
डेमो पछि, म विकास निर्देशक संग कुरा गरे र उनले मलाई आश्वासन दिए कि परियोजना% ०% पूरा छ।
मैले उसलाई समझाएँ कि% ०% को मतलब बिक्रीमा ०% छ। % ०% को मतलब भनेको लक्ष्य पूरा भएन। % ०% को मतलब भनेको सम्भाव्यता र ग्राहकहरु संग सेट अपेक्षाहरु पूरा भएको छैन। जबकि मँ सहमत गर्छु कि 90 ०% काम बहुमत हो, यो सफल छैन कि अन्तिम १०% पूरा नभएसम्म। कि द्वारा 0% सम्म जोड्दछ;)।
यस हप्ता, हामीले फेरि डेमो देख्यौं र यो सुन्दरताको कुरा थियो। हामी अब अन्तिम उत्पादन ट्वीक गर्दैछौं र म विश्वस्त छु कि हामी आउँदो हप्ताहरूमा रिलिज गर्नेछौं जब हामी हाम्रा ग्राहकहरूसँग प्रतिबद्ध छौं। मैले टोलीलाई उनीहरूले बताउन दिए कि तिनीहरूले कती राम्रो काम गरे र हामी कति कामको कदर गर्छौं। यो होमरन होइन ... त्यो तब हुन्छ जब हामी उत्पादन तयार हुन्छौं तर बेसहरू निश्चित रूपमा लोड हुन्छन्।
केहि थप सल्लाह:
सँधै डेडलाइनमा सहमति जनाएको छ।
आवश्यकताहरूमा प्रत्येक परिवर्तन पछि, समयरेखाको पुन: आकलन गर्नुहोस् र फेरि सम्झौतामा आउनुहोस्।
टीमको तयारीको लागि धेरै समयको साथ प्रदर्शनको तालिका बनाउनुहोस्।
प्रदर्शनको लागि अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस्। टोलीलाई थाहा दिनुहोस् कि तपाई उत्साहित हुनुहुन्छ!
टिमलाई सहज बनाउनुहोस् कि तपाईंलाई थाँहा छ कि समस्याहरू खडा हुन सक्छ, तपाईं केवल आशा गर्नुहुन्छ कि उनीहरूले त्यसो गर्दैनन्।
सहयोगी हुनुहोस्, असफलताको लागि पर्खनुहोस् तर आक्रमण गर्नुहोस्।
सार्वजनिक मा प्रशंसा, निजी मा आलोचनात्मक।
कुनै पनि परिस्थितिमा प्रदर्शनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवसरको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाइँ केवल तपाइँको प्रोग्रामरहरूलाई रोजगार खोज्न प्रेरित गर्नुहुन्छ!
याद गर्नुहोस् कि पछिल्लो १०% सबैभन्दा गाह्रो छ। यो अन्तिम १०% हो जुन व्यवसाय बनाउँदछ र बिच्छेद गर्दछ। योजना, तयारी र अन्तिम १०% मा कार्यान्वयन सबै फरक पार्छ।
टैग: संबद्धसम्बद्ध कार्यक्रमcbsकर्पोरेट ब्लगितथ्याङ्कफ्रान्क डेलसाक्षात्कारस्थानीय सम्झौतामार्केटिंग शेर्पामान्य
गुगल कागजात समझाईयो
जनवरी 8, 2008 मा 11: 08 एएम
उत्कृष्ट पोष्ट मलाई लाग्छ तपाईं ठीक हुनुहुन्छ 10% सबैभन्दा कठिन हो।